Cables & Adapters – ICT.com.mm
j5create JUA 254 USB to HDMI Multi-Monitor Adapter (White)K52,332
j5create Micro-USB Cable with Lightning & Type-C Adapter (3-in-1) Rose PinkK22,679
j5create Micro-USB Cable with Lightning & Type-C Adapter (3-in-1) BlackK22,679
j5create 4K HDMI DisplayPort Cable (White)K29,656
j5create USB-C™ Modular Multi-Adapter with2Kits (Silver)K116,001
Hoco LS19 Adapter Type-C to 3.5 mm2in 1 Audio Converter (Metal Gray)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ LS19 Type C 2-in-1 audio converter 3.5mm interface microphone support listening and 1.5A charging at same time 1. Frequency response: 20~20000Hz. 2. Sensitivity: 116dB±3dB. 3. Audio plug:...
Belkin 9.1M 4K High-Speed HDMI Cable with Ethernet
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: Belkin Cable Length: 9.1M
Apple USB-C to VGA Multiport Adaptor (White)-13
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: Apple Color: White USB-C to VGA Multiport Adapter Compatible with iPad Pro, Macbook, iMac, iMac Pro, Mac Mini, Mac Pro The USB-C VGA Multiport Adapter lets...
Anker PowerPort Atom PD1 30W (White)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Anker Nano 30W သည် iphone12နှင့် ယခင်iphoneမော်ဒယ်များကို မူလ5wChargerထက်၃ဆပိုမြန်စွာ အားသွင်းပေးပါသည်။ Iphone နှင့် Samsung Galaxy S20အပြင် smartwatched နှင့် earbuds အပါအဝင်အဓိကကျသော quick charge ဖုန်းများ၊ Macbook ၁၂လက်မတို့အတွက် ၃၀Wအထိအားသွင်းနိုင်သည်။ ဂေါ်လီယမ်နိုက်ထရိုက် ကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် ပုံမှန်...
SSK 11-in-1 Type-C Multi-Function Docking
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Input Interface: Type-C, Gen 1 standard Output Interfaces: 4K HDMI*2, VGA *1, PD3.0 port, USB3.0*2, USB2.0*1,SD/TF Card Reader, Gigabit RJ45 Ethernet interface*1, 3.5 Audio port PD: Comply...
WK Design WDC-107a Sensh Type-C Data Cable (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: WDC-107a Length: 100cm Output: 2.4A (MAX ) Material: Braided wiring, zinc alloy shielding, TPE insulation Operating temperature: 0°Cto35°C Storage temperature: 0°Cto70°C Terminal Color: Black Warranty:6Months...
WK Design WDC-107i Sensh Lighting Data Cable (Blue)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: WDC-107i Cable lenght: 100cm Output: 2.4A (MAX ) Material:Braided wiring, zinc alloy shielding, TPE insulation Operating temperature: 0°C to 35°C Storage temperature: 0°C to 70°C Terminal...
WK Design WDC-107i Sensh Lighting Data Cable (Black)
WK Design WDC-110a Sensh Type-C Data Cable (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: WDC-110a Cable lenght:100cm Output : 5A (MAX ) Material: Braided wiring, zinc alloy shielding, TPE insulation Operating temperature: 0°C to 35°C Storage temperature: 0°C to 70°C...
WK Design WDC-096 Elephant Data Transfer Type-C Cable (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: WDC-096 Cable length:1000mm Output: 5Amax Color: Black Warranty:6Months
WK Design WDC-079a Elephant Data Transfer Type-C Cable (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: WDC-079a Cable lenght: 100cm Output: 2.4A max Material: TPE Wire Operating temperature: 0°C to 35°C Storage temperature: 0°C to 70°C Color: Black Warranty:...
WK Design WDC-079i Elephant Data Transfer Lightning Cable (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: WDC-079 Cable lenght: 100cm Output: 2.4A max Material: TPE Wire Operating temperature: 0°Cto35°C Storage temperature: 0°Cto70°C Color: Black Warranty:6Months
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Output: 2.1a (Max) Adapter 2in1 Lightning Charging And Music Same Time Add Signal From Port Lightning 1 Port To Lightning2Port Color: White Warranty:6Months
WK Design WP-U53 PD+QC 3.0 Fast Charger Adapter (White)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Material: PC+ABS Output 1: USB Type C: DC 5V-3A / 9V-2.22A (max 20W) Output 2: USB A: DC 5V-3A / 12V-1.5A / 9V-2A Input: AC110-240V; 47-63Hz 0.6A...
WK Design WP-U111 Witdeer Series PD 20W Adapter Fast Charger Only (White)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: U111 PD 20W Charger Color : White Input : AC 100-240V 0.5A Max Output : DC 5V-3A , 9V-2.25A ,12V-1.67A Port Type : Type C Code...
WK Design WK-WP-U103 Linton Super Fast Charging Adapter (White)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: WK-WP-U103 Material :PC fireproof Output: DC5V-3.6a 9v-2A 10V-2.4a(24W) Plug Standard: CN Color : White Warranty:6Months